Isaziso sezomthetho kunye neemeko zokuSetyenziswa Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Isaziso esisemthethweni kunye neemeko zokusetyenziswa
Uxwebhu oluhlolwe ku-25 / 03 / 2018
Ukuba ufikile apha, kukuba ukhathalela igumbi elingasemva lale webhusayithi kunye nemigaqo endikhetha ukusebenzisana nawe kwaye ziindaba ezimnandi kum, njengoxanduva kule webhusayithi.
Isizathu salo mbhalo kukuchaza ngokweenkcukacha ukusebenza kwale webhusayithi kwaye ikunike lonke ulwazi olunxulumene nomntu ophetheyo kunye nenjongo yeziqulatho ezifakwe kuyo.
Idatha yakho kunye nemfihlo yakho ibaluleke kakhulu kule webhusayithi kwaye yiyo loo nto ndicebisa ukuba ufunde nomgaqo-nkqubo wabucala.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukwazi ukuba ngubani onoxanduva kule webhusayithi. Ngokuthobela umthetho 34/2002, we-11 kaJulayi, ngeenkonzo zoluntu lolwazi kunye nezorhwebo nge-elektroniki, uyakwazisa:
• Umsebenzi wentlalo ngu: IWebhu ekhethekileyo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokuthengisa kwi-Intanethi.
Injongo yale webhusayithi
Nika umxholo onxulumene nomsebenzi wentengiso ye-Intanethi.
• Lawula uluhlu lwababhalisile beblogi kunye nezimvo eziphakathi.
• Lawula umxholo kunye nezimvo zeenkonzo ezinikezelwayo.
• Lawula uthungelwano lwabantu abanxulumana nabo.
• Iinkonzo zokuthengisa ezezakho kunye nezesithathu.
Ekusetyenzisweni kwabalandeli bewebhu.online uMsebenzisi uthembisa ukungayi kuqhuba naziphi na izinto ezinokonakalisa umfanekiso, umdla kunye namalungelo abalandeli.kanye okanye umntu wesithathu okanye onokuthi onakalise, akhubaze okanye agqithise abalandeli bewebhu. kwi-intanethi okanye oko kuya kuthintela, nangayiphi na indlela, ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwewebhu.
abalandeli.online yamkela ngokufanelekileyo amanyathelo afanelekileyo okhuseleko ukubona ubukho bentsholongwane. Nangona kunjalo, umsebenzisi kufuneka azi ukuba amanyathelo okhuseleko eenkqubo zekhompyuter kwi-Intanethi azithembekanga ngokupheleleyo kwaye, ke, abalandeli.online abanakuqinisekisa ukungabikho kweentsholongwane okanye ezinye izinto ezinokubangela utshintsho kwiinkqubo zekhompyuter. (isoftware kunye neekhompyuter) yoMsebenzisi okanye kumaxwebhu abo e-elektroniki kunye neefayile ezikulo.
Ngayiphi na imeko, kuyathintelwa ukuba aba-USERS (bakwazi ukucima umxholo kunye nezimvo abazibona kufanelekile) indlela yokuziphatha ebandakanya:
• Gcina, upapashe kwaye / okanye udlulise idatha, izicatshulwa, imifanekiso, iifayile, amakhonkco, isoftware okanye ezinye izinto ezingachazwanga ngokwezibonelelo ezisemthethweni ezifanelekileyo, okanye ngokokuqikelelwa kwabalandeli.online ngokuba ngokungekho semthethweni, ubundlobongela, isoyikiso, ukuxhaphaza, inkohliso, ihlazo, amanyala, ubuhlanga, ubuhlanga okanye into engavakaliyo okanye engekho mthethweni okanye enokubangela ukonakala kwalo naluphi na uhlobo, ngakumbi iphonografi.
Njengomsebenzisi, uyaxelelwa ukuba ukufikelela kule webhusayithi akuthethi, nangayiphi na indlela, ukuqala kobudlelwane bezorhwebo ne-Online SL ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, iinkonzo zayo kunye nemixholo ngaphandle kokuphula umthetho. Okwangoku, ukholo olulungileyo kunye nocwangco kuluntu. Ukusetyenziswa kwewebhusayithi ngeenjongo ezingekho mthethweni okanye eziyingozi, okanye nangayiphi na indlela, kunokubangela umonakalo okanye kuthintele ukusebenza kwesiqhelo kwewebhusayithi akuvumelekanga.
Malunga nokubhalwe kule webhusayithi, akuvumelekanga:
Ukuvelisa kwakhona, ukuhambisa okanye ukuguqula, ngokupheleleyo okanye ngenxalenye, ngaphandle kokuba kugunyaziswe abanini abanamalungelo;
• Nakuphi na ukwaphulwa kwamalungelo ababoneleli okanye abanini ngokusemthethweni;
• Ukusetyenziswa kwayo ngeenjongo zentengiso okanye yentengiso.
Ukukhuselwa kwedatha kunye noMgaqo-nkqubo wokugcinwa kwemfihlo
I-Intanethi ye-SL iqinisekisa ukugcinwa kwemfihlo kwedatha yobuqu ebonelelwe ngabasebenzisi kunye nonyango lwabo ngokungqinelana nomthetho wangoku kukhuseleko lwedatha yobuqu, emva kokufumana amanqanaba okhuseleko afunekayo ngokomthetho okhuseleko lwedatha yobuqu.
I-Online SL iyazibophelela ekusebenziseni idatha ebandakanyiwe kwifayile ethi "ABASEBENZISI BE-WEBHU NABABHALISAYO", ukuhlonipha ukugcinwa kwemfihlo kwabo nokuyisebenzisa ngokungqinelana nenjongo yoko, kunye nokuthobela uxanduva lwabo lokubasindisa nokulungelelanisa onke amanyathelo ukuthintela uguquko, ilahleko, unyango okanye ukufikelela okungagunyaziswanga, ngokuhambelana nezibonelelo zeRoyal Decree 1720/2007 kaDisemba 21, evuma iMigaqo yophuhliso loMthetho weOrganic 15/1999 kaDisemba 13, Ukukhuselwa kweenkcukacha zoBuntu.
Le webhusayithi isebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo zokufaka ulwazi lomntu oluchaziweyo kuMgaqo-nkqubo wabucala nalapho ukusetyenziswa kunye neenjongo zichazwe ngokweenkcukacha. Le webhusayithi ihlala ifuna imvume yabasebenzisi yokuqhubekeka idatha yabo yobuqu ngeenjongo ezichaziweyo.
Umsebenzisi unokusebenzisa, ngokubhekisele kwidatha eqokelelweyo, amalungelo amkelwe kwi-Organic Law 15/1999, yokufikelela, yokulungisa okanye ukucima idatha kunye nenkcaso. Ukusebenzisa la malungelo, umsebenzisi kufuneka enze isicelo esibhaliweyo kunye nesayinwe ukuba angathumela, kunye nefotokopi yesazisi okanye uxwebhu olufanayo lokuzazisa, kwidilesi yeposi ye-Intanethi ye-SL okanye nge-imeyile, iqhotyoshelwe ikopi ye-ID kwi: info (at) abalandeli. online. Ngaphambi kweentsuku ezili-10, isicelo siya kuphendulwa ukuqinisekisa ukuphunyezwa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
I-Intanethi ye-SL yazisa ukuba kukho iifom zezikhalazo ezifumanekayo kubasebenzisi nakubathengi.
Umsebenzisi unokwenza amabango ngokucela iphepha lawo lamabango okanye ngokuthumela i-imeyile kulwazi (at) abalandeli.kubonise igama lakho nefani, inkonzo okanye imveliso ethengileyo kunye nokuchaza izizathu zebango lakho.
Ungalibhekisa ibango lakho ngeposi ngeposi ku: Online SL, usebenzisa, ukuba unqwenela, le fomu ibango ilandelayo:
Utyikityo lomsebenzisi (ukuba lubonisiwe ephepheni):
Ngale miQathango Jikelele, akukho malungelo obunini okanye obunini bepropathi obunikiweyo kwi-web abalandeli. Intanethi enepropathi enomgangatho okwi-Intanethi ye-SL, ukuveliswa kwakhona, ukuguqulwa, ukuhanjiswa, ukunxibelelana esidlangalaleni, ukwenza ukuba kufumaneke eluntwini, ukukhutshwa akuvumelekanga kuMsebenzisi. ukuphinda usetyenziswe, ukugqithisela, okanye ukusetyenziswa kwayo nayiphi na imeko, ngayo nayiphi na indlela, okanye nayiphi na, ngaphandle kwaxa kuvunyelwe ngokusemthethweni okanye kugunyaziswe ngumnini wamalungelo ahambelanayo.
Umsebenzisi uyazi kwaye uyayamkela into yokuba iwebhusayithi yonke, equlathe ngaphandle kokuthintelwa isicatshulwa, isoftware, umxholo (kubandakanya ulwakhiwo, ukhetho, ulungiselelo kunye nokuboniswa okufanayo) iifoto, imathiriyeli audiovisual kunye nokupheka, ikhuselwe luphawu, uphawu kunye namanye amalungelo asemthethweni abhalisiweyo, ngokungqinelana nezivumelwano zamazwe aphesheya apho iSpanish iqela kunye namanye amalungelo epropathi kunye nemithetho yeSpain.
Kwimeko apho umsebenzisi okanye umntu wesithathu ethathela ingqalelo ukuba kukho ukunyhashwa kwamalungelo asemthethweni epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ngenxa yokwaziswa komxholo othile kwiWebhu, kufuneka bazise i-Intanethi nge-SL ngemeko echaziweyo:
Chaza iziqulatho ezikhuselweyo ngamalungelo obunini bepropathi kunye nendawo akuyo kwiWebhu, ukuqinisekiswa kwamalungelo obunini bepropathi enomgangatho obonakalisiweyo kunye nesibhengezo esivakalayo apho umntu onomdla anoxanduva lokuqinisekisa ulwazi olunikezwe kwisaziso.
I-Intanethi ye-SL iyala naluphi na uxanduva malunga nolwazi olufunyenwe ngaphandle kwale webhusayithi, kuba umsebenzi wamakhonkco abonakalayo kukwazisa uMsebenzisi malunga nobukho beminye imithombo yolwazi kwisifundo esithile. I-Intanethi ye-SL iyaxolelwa kulo lonke uxanduva lokusebenza ngokuchanekileyo kwezi makhonkco, isiphumo esifunyenwe ngonxibelelwano oluchaziweyo, ukunyaniseka nokuba semthethweni komxholo okanye ulwazi olunokufikelelwa, kunye nomonakalo uMsebenzisi osenokufumana ubunzima kuwo ngenxa yolwazi olufunyenwe kwiwebhusayithi edibeneyo.
I-Intanethi ye-SL ayinikezeli nasiphi na isiqinisekiso kwaye ayinaxanduva, kuyo nayiphi na imeko, ngomonakalo walo naluphi na uhlobo onokubangelwa:
Ukunqongophala kokufumaneka, ukugcinwa kunye nokusebenza ngempumelelo kwewebhusayithi okanye iinkonzo zayo kunye nemxholo;
• Ubukho bentsholongwane, iinkqubo ezingalunganga okanye eziyingozi kwimixholo;
Ukungabikho ngasonye, ​​ukungakhathaleli, ubuqhetseba okanye ngokuchasene nesi Saziso somthetho;
Ukunqongophala kwezinto ezisemgangathweni, umgangatho, ukuthembeka, ukulunga kunye nokufumaneka kweenkonzo ezibonelelwa ngabantu besithathu kwaye zenziwa zafumaneka kubasebenzisi kwiwebhusayithi.
Umboneleli akanoxanduva phantsi kwazo naziphi na iimeko ngomonakalo onokubakho ngokusetyenziswa okungekho semthethweni okanye okungafanelekanga kwale webhusayithi.
Ngokubanzi, ubudlelwane phakathi kwabalandeli kwi-intanethi kunye nabasebenzisi beenkonzo zayo ze-telematic, ezikhoyo kule webhusayithi, zixhomekeke kwimithetho yaseSpain nakulawulo nakwiinkundla zaseGranada.
Kwimeko apho nawuphi na uMsebenzisi anayo nayiphi na imibuzo malunga nesi saziso somthetho okanye naziphina izimvo zakho kubalandeli bewebhu.kubhalwe kule nombolo ungaqhagamshelana info (at) abalandeli.online
abalandeli.Leline igcina ilungelo lokuguqula, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso sangaphambili, inkcazo kunye nolungelelwaniso lwabalandeli bewebhu.kwiisaziso somthetho.